Onye Mmekọ: Jikwaa ndị mmekọ gị, ndị na-ere ahịa na ndị mmekọ | Martech Zone
Mmekọrịta: Jikwaa ndị mmekọ gị, ndị na-ere ahịa na ndị mmekọ gị
Tọzdee, Septemba 24, 2020 Wenezdee, Jenụwarị 13, 2021 Douglas Karr
Worldwa anyị dijitalụ na ọtụtụ mmekọrịta na njikọta a na - eme na ntanetị karịa ka ọ dị na mbụ. Ọbụna ụlọ ọrụ ọdịnala na-agagharị ahịa ha, ọrụ ha, yana aka ha n'ịntanetị… ọ bụ n'ezie ọhụụ ọhụụ ọhụụ ebe ọ bụ na oria ojoo na mkpọchi.
Okwu ire n’onu bu ihe di oke mkpa n’iile ahia. Na ọdịnala ọdịnala, ndị na-ede aha ndị a nwere ike ghara ịrụ ọrụ… ịgafe nọmba ekwentị ma ọ bụ adreesị ozi-e nke otu onye ọrụ na-eche ka ekwentị gbanye. N'ime ụwa dijitalụ, mmekọrịta gị na ndị mmekọ gị nwere ike ijikwa, nyochaa, ma mejuputa ya n'ịntanetị yana oke arụmọrụ.
Gịnị bụ Mmekọ Mmekọahụ (PRM)?
Njikwa mmekọrịta mmekọrịta bụ usoro nke usoro, atụmatụ, nyiwe, na ikike sitere na weebụ nke na-enyere onye na-ere ahịa aka ijikwa mmekọrịta onye ọlụlụ. Ndị mmekọ nwere ike ịgụnye ndị na-ere ahịa ndị ọzọ, ndị na-ebugharị ala na ndị isi ala, ndị na-ere ahịa mmekọ, na ndị na-ere ahịa.
Mmemme mmemme na-agbanwe ndị ọrụ, ndị na - ere ahịa, na ndị na - ere ahịa na-eresị ndị ahịa gị ezigbo mma ka ha gbakwunye ndị otu ahịa gị. Ọ bụ ya mere ụlọ ọrụ SaaS na-eto ngwa ngwa jiri mmekọrịta iji kpalite nnweta, njigide, na nnweta, karịa ihe ga - ekwe omume naanị.
Onye Mmekọ PRM
Onye Mmekọ bụ ikpo okwu Mmekọrịta Mmekọrịta Mmekọrịta na n'ọma ahịa. PartnerStack na - eme ihe kariri ijikwa mmekorita gi - o na - ewulite uzo ntinye ohuru site n’inye ndi ozo ike iji mee nke oma.
PartnerStack bụ naanị onye nlekọta njikwa Ezubere iji mee ka ego gbanyeghachiri ụlọ ọrụ abụọ ahụ na ndị ha na ha rụkọ ọrụ - nihi na ọlụ gị na ndị ibe gị bụ nke gị. Atụmatụ na uru gụnyere:
Ọnụ ọgụgụ ọtụtụ ọwa - Ma ị na-achọ imechi azụmahịa ndị ọzọ, mepụta ihe ndị ọzọ na-eduga ma ọ bụ weta okporo ụzọ na mkpọsa gị na-esote, a na-ewu PartnerStack iji dozie ụdị mmekọrịta ọ bụla - ha niile otu oge.
Sochie njikọ onye mmekọ, ndu, na azụmaahịa n'ime PartnerStack
Tinye mmemme mmemme ndị ahịa ozugbo na ngwaahịa gị
Ree ozugbo site na netwọkụ ndị mgbasa ozi na PartnerStack API
Mee ka arụmọrụ ibe gị dịkwuo oke - Mmemme ndị na-ebute njikọ aka ụzọ na-eweta ego ọzọ. PartnerStack na-enyere gị aka ịmepụta ahụmịhe ọdịnala maka ọwa ibe gị ọ bụla, na-azụlite ndị ọhụụ ọhụụ n'ime ndị na-eme ihe nkiri kachasị elu.
Mepụta otu ndị otu nwere usoro ụgwọ ọrụ na ọdịnaya pụrụ iche
Jikọọ onye ọrụ ibe gị na ụgbọ mmiri na ụdị mpempe akwụkwọ na email na-aga
Inye onye ahia ahia ahia n’ime dashboard nke onye gi
Machiini onye gị na ugwo - Otu n’ime ihe kpatara kpatara ụlọ ọrụ ji ebugharị mmemme ha na PartnerStack: ike gwụrụ ha ịhapụ igbu oge na-eme ka ndị mmekọ kwụọ ụgwọ kwa ọnwa. PartnerStack na-akwụ ndị mmekọ ụgwọ maka gị.
Anata otu akwụkwọ ọnụ ahịa kwa ọnwa, nke akwụ ụgwọ site na kaadị akwụmụgwọ ma ọ bụ ACH
Ndị mmekọ na-eweghachi ụgwọ ọrụ ha site na Stripe ma ọ bụ PayPal
Na-agbaso ụkpụrụ ụwa niile ma nye ndị otu ego ọhụụ
Anyị na-eji PartnerStack mee ka ndị ahịa, ndị mmekọ, na ndị na-ere ahịa ike. Ọ bụ a-nkwụsị ngwọta maka onye onboarding, ebighị, payouts na anyị niile admin mkpa; ihe na-enye ume ọhụrụ nye ọdịdị teknụzụ onye ọlụlụ dị ugbu a.
Ty Lingley, Unbounce Director nke Mmekọrịta
Onye Mmekọ Onye Mmekọ
PartnerStack nwere ahịa na-arụsi ọrụ ike na ọtụtụ narị ụlọ ọrụ ndị na-eji ngwanrọ ha, na-enyere ndị mmekọ aka (dị ka m) ịchọ na ịchọpụta ohere iji kwalite nnukwu ngwaọrụ. Ha nwere ngwanrọ n'ọtụtụ vetikal - gụnyere ndị ọrụ mmadụ, ahịa, azụmaahịa, ndekọ ego, mmepe, nrụpụta, soshal midia na ndị ọzọ.
Debe Ihe ngosi Onye Mmekọ Taa
Ngosi: Anyị bụ ndị mmekọ Onye Mmekọ!
Tags: Mgbakwunye njikwa ikpo okwuMgbakwunye marketingMgbakwunye n'elu ikpo okwunjikwa ndị mmekọonye nlekọta njikwanjikwa mmekọrịta mmekọmmekọprmNtuziaka managementNtuziaka onye nlekọtaNtuziaka n'elu ikpo okwunchịkwa nchịkwa resellerreseller n'elu ikpo okwusaasihe bụ prm